3 Iindlela Deny uThixo — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Ngaba ndimkhanyele uThixo Universe? Yikholwe okanye hayi, lo ngumbuzo obalulekileyo sonke ukuba ucinge. Icacile iSibhalo ngaloo ebomini obungunaphakade yabaqhutywa abo bathembele uThixo zikholwe Iindaba zakhe ezilungileyo, kwaye isigwebo nje enzekayo abo bakuphikayo kuye. Kodwa kukho ngaphezu kwesinye indlela ukukhanyela uThixo. Nazi ezintathu ndiyifumene kwiTestamente Entsha.
1. Okhanyelayo ukuba uYesu Ngubani Wathi yena Ngaba
“Ngubani na ixoki, ingenguye okhanyelayo ukuba uYesu unguye uKristu? Ukuba umchasi, omkhanyelayo uYise noNyana. Akukho namnye abamkhanyelayo uNyana unaye noBawo. Othe wavuma uNyana unaye noBawo.”
Kukho abantu abaninzi kwihlabathi lethu namhlanje ucinge njengabantu ngokomoya okanye unqulo. Bakholelwa ukuba uThixo ukho, kwaye uzame ukuba bamnqule ngendlela yabo. Mhlawumbi baya kubona uYesu ngumfundisi omkhulu okanye umprofeti ovela kuThixo. Kodwa ukuba anikholelwa ukuba uYesu ngubani yena wathi yena, bona abo bakuphikayo ukuba.
Ukubona uYesu nje njengomfundisi omkhulu yokuziphatha nangoku kuMala kwaye ngoko uchasa uThixo. UThixo uyalela ingqalelo yethu uYesu nguMsindisi wehlabathi kwaye akasiniki na umendo ezinye (John 14:6, iZenzo 4:12).
Ngoko ngokugatya uYesu uchasa uThixo. kodwa, ngokuba uYohane 1:12 uthi, "Kubo bonke abâmamkeláyo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe, wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo.” Nabani na ube ngumntwana kaThixo, ukuba uyakholwa kuYesu.
2. Abangavumiyo ukuba uYesu Phambi Abanye
“Ngoko ke wonke umntu othe wandivuma phambi kwabantu, nam ndiya kulivuma phambi koBawo eZulwini, Osukuba ke eya kundikhanyela phambi kwabantu, nam ndiya kumkhanyela nam phambi koBawo osemazulwini nguBawo.”
Ngoko mhlawumbi Ndiyabulela ukuba uYesu uyiNkosi ezintliziyweni zethu. Kodwa nangoku siyamkhanyela ngokuba neentloni phambi kwabanye. ngoku, siye sonke lacothozisa ukuyivuma ukholo lwethu phambi kwabanye. Siphila inkcubeko eya isiba butshaba unqulo ngokukodwa ubuKristu. AmaKristu peyinta zenene abakholelwa abaziziyatha, nengozi, kunye kwiintsomi nephakuphaku. Oku ngamanye amaxesha ukuba basilele, nabangafuni bavume ukuba uYesu phambi kwabo thina ucinga idlale ngathi.
Oku buhlungu. Oku kwenza uYesu khangela amancinane oko ukukhanyela yonke into yena. Kodwa lumkiswa, ukuba isigqibo ukukhanyela uYesu phambi kwabantu, Kwakhona uya kundikhanyela phambi uBawo. Kwaye xa oma phambi koThixo kokuba uYesu uthi, "Yena kunye nam,” akuyi ukuba sibe. Impendulo eyiyo uKristu ihlazo okanye uloyiko, kodwa ukungafihlisi kunye nokuzimisela ukwabelana phambi kwabanye.
“Bayavuma ukuba bayamazi uThixo, kodwa bayamkhanyela ngemisebenzi yabo.”
Ngoko mhlawumbi ngeli xesha uziva ingathi ngokwenza omhle. Uthe wamvuma uYesu Kristu, kwaye sinelunda kuthi ukuba ungumKristu. Umbuzo olandelayo ngani, "Ubomi bakho kuthini?” Kuyenzeka ukuba batsholoze ezincotsheni uphahla 'UYesu yiNkosi, mna wakhe umfundi!” kodwa abe nobomi elixelegu ezifana ukuba amazwi ethu batshoniswe ngaphandle.
kuTito 1, UPawulos uthetha nabafundisi bobuxoki nokumkhanyela uThixo ngemisebenzi yabo. Kodwa nayiphi na kuthi onokuphila ngendlela olungavisisaniyo into esiyithethayo. Ukholo uYesu uya kusoloko ukutshintsha indlela esiphila. Ngoko ke, ukuba ubomi bakho kubonakala ngathi akukho nto iye yatshintsha, into ezingalunganga. nenkanuko wethu ukukhanyela Licebo kaThixo umnqweno wesini. ikratshi wethu ukukhanyela indawo kaThixo liliziko lazo zonke izinto. Yonke yokungathobeli wethu ukukhanyela Indima kaThixo iNkosi efanelekileyo yabo bonke Creation.
Amazwi no kuvuma uYesu, kodwa imisebenzi yakho siyamkhanyela? Ngaba uyamthanda abanye (John 15)? Ngaba ngokumthobela (John 14:15)? Ngaba zixakatha neziqhamo (Galati 5:22-23)? Ngaba ngokuncama uzinikela kunye nezibonelelo zakho kwabanye (2 Korinte 8:1-5)? Ngaba nifuna uThixo iLizwi laKhe?
Abaninzi kuthi uya kujonga ezi ngongoma ubone ezinye ngokwethu komnye okanye kubo bonke. Ukuba wenza kuziva eneentloni ngenxa iindlela oye baMala, kukho Iindaba Ezilungileyo. Nokuba ukukhanyela uThixo kuhlawulelwa emnqamlezweni uYesu, njengoko sibona oko ngokucacileyo noPetros. Ukuba babuye isono lokwala, kwaye ndiyamamkela ngokholo, ukuba axolelwe isono.
Gcina ukuthemba uKristu ifam.
Victor • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:17 mna • impendulo
Ebendiyifuna ngayo le. ikakhulu ukuzenzisa “/
Dani • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:18 mna • impendulo
Kuhle! Enkosi Mnumzana! :)
Thomas Stewart • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:18 mna • impendulo
post Wonderful! Oku nakanjani eyabangela ukuba bacamngce izenzo zam. kuphambuko kuso Small…le vesi obalulwe kuTito kufuneka ibe 1:16, hayi 2:16. Ngamana uThixo uqhubeka ukusebenzisa kuwe ngamandla umfo wakwaThixo!
William • EyoKwindla 27, 2018 ngexesha 2:32 pm • impendulo
umzalwana Excellent uThixo, I qhubeka usebenzisa!!!
Guest • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:19 mna • impendulo
Ndiyakholwa uYesu ngunyana kaThixo wathumela lo mhlaba ngentlawulelo bonke abalahlekileyo. Kodwa ukuba uthe, Mna uhlobo lomntu oneentloni nabanye abantu, kwaye ufumana kunzima izihlandlo lwentlalo asilubandakanyi incoko ngoYesu iVangeli, singasathethi iincoko asilubandakanyi ukuthetha ngoYesu kuba Ndiyaqonda ukuba Ndinesithukuthezi neziphumo. njani ukoyisa le uloyiko? Ezinye iivesi eziya kukunceda?
ezinqinileyo • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:20 mna • impendulo
I ngokwenene abayiqondi into ukuthini xa kuziwa Ngaloo maxesha xa incoko kubonakala ukuba anti zamaKristu okanye zonqulo kuba ndithanda ukufumana ukuba eninzi ukuba emkhosini. Enyanisweni nezinye nje ngomhla happend… A umphathi wathetha nam malunga Aliens adale abantu emhlabeni kunye inkolelo yakhe ngazo. Ukuba you'r ungayazi le mbono kuziwa kwi Imbali Channel kakhulu (Aliens Ancient). Nangona le mbono umdla kakhulu kum, Andikholelwa ngokwam. Ngenye indlela, Ndithanda ukwenza imisebenzi ok xa kuziwa ekuthetheni iNkosi yethu. Maxa wambi ndithi xa novalo, ngamanye amaxesha andikho, kodwa into ebalulekileyo kukuba ukuthetha. Makwazeke oko ukukholelwayo. Ukuba nesibindi wenza into nangona ukoyika kakhulu. Ukuba sithembeke ngokupheleleyo, ekugqibeleni lo mfo kwandenza buhle osisiyatha. Ndandisoyika kakhulu, Ndilibele ulwazi oluninzi endinaye emva yentloko yam, waya lutho. Ndaziva abaziziyatha kwaye ndiqinisekile Ndakhangela osisiyatha. nokuba, Ndazimisela kakhulu yaye uyazi kakuhle into ndikholelwa nangona mna nako ukwenza ityala elikhulu ngokuba. Le Ndiyakholwa kuyinxalenye yokuba ngumKristu; intshutshiso. Ndaziva ehlukunyezwa kwaye rediculous, kodwa ukuba kwakhona ithuba weza ukuthetha ngoThixo ndiya kuyenza lonke kwakhona ngenxa yezikumkani, kodwa ndiza kuba ixesha ukulungele olandelayo kucace lol… ngethemba. Nje ixhomekeke kwindlela esicinga ophilayo uThixo, yaye kuKristu sibona ukuba ophilayo uThixo siya kutshutshiswa kwaye harrased. Into ebalulekileyo kukuba ukumela uThixo. I imagin UThixo uthanda ukubona uyoyika inkwenkwana attemt ukuthetha uThixo kwimeko impikiswano, Niyabona ke ngoko, ukuba theologan enkulu wavala elowo endleleni yakhe. Kazi uJesu wayenjani kwabanye xa emnqamlezweni. Ndicinga singekho anjengeli ekunene, kuba wayesithi ukuba uThixo, kodwa abanye babona ukuba couldnt kusenokukunceda yena emnqamlezweni. Yalinda singekho kwabanye kanye njengoko ndaza ndamgqala yesiyatha kwabanye zam incoko ne Captian, kodwa Kazi ukuba uBawo wacinga kaYesu emnqamlezweni… ngiyaziqhenya siphethe.
“Musa ukuba affraid abo babulala umzimba, kodwa bengenako ukuwubulala wona umphefumlo. Kunoko ukuba affraid lwe lowo unako ukutshabalalisa umphefumlo kwanomzimba esihogweni somlilo.”
Aleisha • EtiMnga 2, 2014 ngexesha 8:52 pm • impendulo
Hi ngokwenene eli izimvo ebelungiselela kum apha ngoDisemba ka 2014. I nje ndacela uThixo ukuba andixolele ukuba andincede ukuba siyamkhanyela kwaye ukuba ndingaze kufuneka zibonakalise Yena LLord andikhathali ndikhangela indlela usisidenge logama nje uBawo abazidlayo, I LOVE YOU UYESU.
TonyStartk • EyoKwindla 5, 2018 ngexesha 8:46 mna • impendulo
Thobelani Rob, unkulunkulu kweendudumo.
Mireyjesu • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:20 mna • impendulo
1 Korinte 1:17, Efese 6:18-20
Guest • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 8:21 mna • impendulo
Enkosi, ezo vesi ezimbini ezinkulu! I kakhulu uncedo lwakho
JacobP • EyeNkanga 24, 2014 ngexesha 9:37 pm • impendulo
Enkosi kakhulu kule posi! Kwakukhuthaza kakhulu kwaye kuyakha. Ndithande uqonde evela izimvo kakhulu! UThixo anisikelele nonke! Dumisani Kristu iNkosi yamakhosi neNkosi yeenkosi! <3 Ngokunyaniseka mna silwa uqale. A lot of times I feel like I'm too bad I won't get any better and I don't really believe with all my heart all my soul and all my mind. I get upset cause I don't put him first a lot. If I did I wouldn't give in to lust. Ndiyazi mna ndiyamthanda yena tho. Ndinombulelo! Ndiyazi ukuba uyandithanda! Ndiyazi ukuba uyabaxolela abantu abamone zam. I don't understand why. I'm very shy and fearful. It's very hard to talk and show that I'm proud of believing in God I already feel like I'm gonna be ridiculed or they won't care to hear or talk about God. Ngamanye amaxesha ndicinga kuba neentloni. I'm not ashamed of Christ. I'm ashamed that I don't have all the answers and I can't explain all the details that I don't know enough. And I'm ashamed I'm not going to represent Christ well. Ngoko ukuba uyoyika kwaye cwaka. I'm sorry I'm making such a long comment. But I guess I'm just saying I needed the encouragement! That I'm not alone! uKristu ethethelela! I honestly think I am a bad Christian and sometimes doubt I'm saved. A lot mva kuba sele usebenzisa iziyobisi yaye ikhanuka alot kwaye ndiziva ngathi ndiwile. Like because I'm using drugs again and lusting even tho I want to stop truly, does that mean I'm not saved anymore?
rita • EtiMnga 11, 2014 ngexesha 5:17 pm • impendulo
I couldnt ukumisa iinyembezi zam xa i funda Sayontoni ebhaliweyo ngenxa Ngendiba wakhanyela uYesu ngaphandle ithetha kwaye riam ngokwenene uyazisola cuz i love uYesu kwaye i believe truely kuYesu noThixo yaye andisayi kuphinda kundikhanyela okanye kudaniswa kunjalo. Zange khe neentloni uYesu ULOTE wayo nje ukuba abantu benze kum khangela isiyatha xa i sithetha belive yam kuThixo yaye kundenza ndizive lule riam okanye into kwaye kundenza angafuni ukuthetha belive My kuYesu. Thats engalunganga i Ngaba aphinde futhi i wathandaza kuThixo noYesu forgivness kwaye ndiya ukutshintsha ukusuka ngoku kwaye i Ndiqhelile kundikhanyela naye kunjalo. I love you uYesu noThixo enkosi riam abangamaKristu riam ngiyaziqhenya. Siyabulela Flaco kunye jacobp ntoni nobabini okubhale wachukumiseka gqitha. rita
Latoyah Austin • EyoMqungu 28, 2015 ngexesha 10:23 pm • impendulo
@JacobP: Andiqinisekanga ukuba nabani na waphendula umbuzo wakho isiphelo akukho okanye. nokuba, Ndaziva kwakhokelela ukuphendula: ndisebenzisa iziyobisi, bane-, ukuziqhenya, etc emihle abavela nesono kwethu. Bona izono nesono, ubeke nje, yini into ukuluma uThixo. Xa uYesu wafa emnqamlezweni, Wasindisa imiphefumlo yethu. John 3:16 kuziwa umoya wam. Ngoko ke, usindiswa uYakobi. nokuba, umsebenzi Akwenziwa b / c ngoku kufuneka simema uMoya oyiNgcwele ukuphinda-ekuzalweni kwethu –njengoko uYesu waxelela uNikodemo, kufuneka azalwe ngokutsha. KwabaseRoma 12:2 usixelela ukuba ke ukuthatha isimilo sabantu beli phakade, kodwa ukuba kumila kumbi ngokuhlaziyeka iingqondo zethu. and KumaGalati 5:16 ithi xa sihleli ngoMoya, siya kuthi ke niyizalise inkanuko yenyama. Ngoko ke, uYakobi, sisindisiwe; kunjalo, ngoku kufuneka sivumele uThixo ukutshintsha imikhwa nesono, iminqweno, kunye imiqondo ngoMoya wakhe– ngokusebenzisa iLizwi laKhe. Thina abangcwalisiweyo, bayahlanjululwa, kwaye zihlanjwe uKristu (WayeliLizwi eliphilayo)- Ngokubhekiselele Efese 5:25-26. Imfundiso yebali yi JacobP: Ewe, usindiswa. Kwaye uyakuthanda uYesu kakhulu. nokuba, ezimpilweni zethu isono ebomini bakho / ukusahlula thina kuye kwezo ndawo. Kufuneka ukuba iLizwi laKhe ukuba ukuhlaziya iingqondo zethu zemihla ngemihla kunye nokutshintsha sibe umfanekiso wakhe. Sifuna ukuba abalandeli bakaKristu, nje ngelizwi nangezenzo–ezintliziyweni zethu. Ngaba UThixo ukubona kakuhle balambela banxanelwe ubulungisa –ukwenza sifuna ngokwenene? …Ngokwenene themba oku kuyanceda omnye kubazalwana noodade bam.
Femi • EyoMdumba 22, 2015 ngexesha 7:32 mna • impendulo
Oku kuhle kakhulu! ubusiswa le
Kerry • Isilimela 1, 2015 ngexesha 9:59 mna • impendulo
abahlobo bam abathandekayo kuKristu,
Ndithandaza izinto zihamba kakuhle nonke. Kuyandivuyisa ukubona abaninzi ukuchaza iingxaki zobomi kunye lungena kwiingxoxo ukoyisa. Kwakhona Ndiyavuya ukubona abanye khuthaza nge isibhalo nothando ukunceda abo basokolayo. Ndikhe ndacinga iingongoma eziliqela umntu ukusebenzisa ngoxa iqela mhlawumbi ukunceda ukungakhuseleki sonke isabelo. Jonga kulo ngale ndlela: sonke sibe nenkqubo inkolelo ngaphakathi sonke. Leswaku va yintoni ngokwenene “kuwe” kuthatha isibindi, kodwa xa kufika kubantu uyintlebi kuwe ngenxa “yintoni eyenza ukuba unique”, ayikho ngokwenene ingxaki yakho. Musa ukoyika ukuthi intetho yakho emkhathazayo uThixo ndiyanithanda. Yigcine ilula. Asinako konke kuba njengoPawulos, kodwa singaba yakuloAndreya. Ndiye ndafumanisa umthombo uthando, uYesu. Ndiye ndafumanisa into endenza noxolo: uYesu! Mhlawumbi xa abanye ubona noxolo kwaye inxaxheba “Ihlebo” Izakutshintsha umntu oyedwa. Khumbula ukuba indumiso ngokwenene sifuna uYesu ', kodwa aye-> Gcina up ukulwa, akwenzeki libe lula. Ikuvumela sonke bahambe ndawonye , sisilwa umlo omhle. Ukuba uThixo abe Uzuko!
josh • EyoMsintsi 12, 2015 ngexesha 8:13 pm • impendulo
Le nto yandinceda ngakumbi uhanahaniso njengoko mna intshembenxa ngoko ndizama ukuba alungise. Ndibulela kakhulu kule
Katie • EyoMsintsi 18, 2015 ngexesha 5:03 mna • impendulo
@latoyah Austin oko ukubhalileyo kuyinyaniso kakhulu! UThixo wenza abasithandayo thina sisindiswa. @jacobp Kodwa kufuneka kuqala wamvuma ngomlomo wethu izono zethu kuKristu (oku kwenziwa ngokusebenzisa inguquko) yaye emva koko babuya ezindleleni zethu ezimbi (Ezekiel 14:6). Tshintsha alwenzeki phezu ubusuku lwenguquko ke imihla / rhoqo ,kodwa xa sivula iintliziyo zethu size sikulungele kuThixo ukutshintsha us He. Ndiyathandaza ukuba iNkosi iya kuhlangana nawe kanye apho wena kule yokuhamba kwaye uya kuqalisa usithiyile isono njengoKristu. Ndiya kubuxela mna nesibindi phezu kwenu ukuba xa uvavanyo wayemela uKristu nyakenye kwakhona uya kufumana amandla omoya wakhe ukuba athethe ngenkalipho! Kwaye sincede nabanye ukuba bamazi uKristu (ngaba enxulumene abo baye uphi). UThixo nguThixo qhinga kwaye akazenzi iimpazamo, apho izinto zingahambi xa sicinga ukuba unguthixo uzame ukwenza izigqibo eyethu / ukhetho ebomini. Ndiyathemba ubona oku kwaye kwindawo engcono ngoku. Kwakhona ukufunda bible, UThixo wasinika imiyalelo ngendlela yokuphila ITestamente Entsha (yonke into emva Matewu) yindawo enkulu ukuqala; makuthethe Nditshonile kwaye urhwebe ingqondo phambi kokugqithela into elandelayo.
JaniceMNewton • EtiMnga 7, 2015 ngexesha 10:32 mna • impendulo
Kufuneka ucele uYesu ukuba andixolele , i ndimgatyile ngeendlela ngaphezu kwesinye ngenxa yokungazi, uziva liboniswa ukuxolelwa xa akukho malunga i am indlela elungileyo, kodwa yegazi, ababeliphalaze uYesu waba ngaphezu kokwanele.
Justin Mkandawire • EyoMqungu 23, 2016 ngexesha 5:11 mna • impendulo
Timmie • UCanzibe 15, 2016 ngexesha 10:26 pm • impendulo
Siyabonga kule. Mna isoloko ikhangela iindlela ezintsha ukukhanyela uthixo kunye eli nqaku yaba luncedo kakhulu ekunikeni kum izinketho ezintsha onyeliso. Yonke “UThixo nje elinye intsomi etyeni ozelwe umphakathi yobudala ngobhedu kungekho nofifi ukuba indlela indalo iyasebenza.” intetho ufumana ubudala emva kwethuba. Kuba kukho ixesha ugalelwe phezulu kunye “Akukho bungqina ngaphandle iitekisi yezibhalo ubukho yembali kaYesu Kristu nangona umsebenzi oqaqambe uBukhosi baseRoma wenza iingxelo.” kwaye i “Akukho mntu kufuneka ubuyele esixekweni ukuba wazalelwa ukuba ubalo kwaye ukuba ukuhlawula irhafu. AmaRoma ukuba wayefuna ukwazi apho bahlala abantu ngoku yaye befuna imali yerhafu apho. Lokuya eBhetelehem sisixhobo zoncwadi eyavelayo emva isibakala ukuze uYesu’ isayithi ukuzalwa umgca nge isiprofeto yangaphambili. ngokunjalo, amaRoma ukuba akukho kwerekhodi yabo nabaphi na abantu okunjalo okanye irhafu.” Iintetho kodwa abo ndidiniwe emva amaxesha elinesibini eziliqela yokumane ukuba abantu abangakwaziyo lenu ukucinga ngokwabo imizuzwana elishumi. Ngoko kwakhona, Ndiyabulela kuwe ngenxa yokubonelela mna kunye neendlela ezintsha lokuqamba ukukhanyela ubukho benu isibhakabhaka daddy engabonakali. Ndiyayibulela ngokupheleleyo!
James Ushie edlule • Isilimela 18, 2016 ngexesha 5:06 mna • impendulo
Ndiyakuthanda Oku; Aboni Kufuneka Amead Ezindleleni Zethu.
LamarHayes • EyeThupha 14, 2016 ngexesha 5:30 mna • impendulo
Timmie : “Lokuya eBhetelehem sisixhobo zoncwadi eyavelayo emva isibakala” … ngokwenene ? Wena ngempela le ? umbuzo nje omnye, 4 amagama … “kuthekani ukuba sele engalunganga”.
Emily O • EyoMsintsi 15, 2016 ngexesha 12:25 pm • impendulo
ntoni xa umntu analo engumKristu ubomi babo bonke, ubhaptiziwe, wabona imimangaliso yenzeke, yaye phi na ke ngakumbi uxelele ubuxoki umntu ngokuthi “Bendingayi kuthi mna umKristu kodwa ndikholelwa ukuba akhona amandla aphezulu”.. UThixo uya kusixolela kuzo?? ukuba baziva ngokwenene embi ngayo kwaye baguquke?
Sean • EyoMsintsi 24, 2016 ngexesha 10:15 pm • impendulo
Iye ngeke. UThixo uyasiqonda ubuthathaka bethu. Loo mntu nje kufuneka abe unashamed yeVangeli. UThixo ukhangela ukuba liyanda, hhayi ukuphelela instant.
Brucid • EyeDwarha 14, 2016 ngexesha 5:19 mna • impendulo
Funda incwadi 2 Korinte 5:17-19
UThixo zamadoda izono zabantu.
Funda 1 JOHN 1:9 nayo.
Khankanya: 6 of 3.14 – Ethoyilethi Last Iphepha Roll
Dennis • EyeNkanga 10, 2016 ngexesha 1:17 mna • impendulo
i think i ve wakhanyela Jeseu ngemisebenzi yam (ukuzenzisa) kodwa ndimbulela uThixo ngenxa pende emnqamlezweni.
Larry Johnson • EyoMqungu 15, 2017 ngexesha 1:18 pm • impendulo
Ukufuna Inyaniso. Enkosi
daniel • EyoMdumba 15, 2017 ngexesha 1:15 mna • impendulo
daniel • EyoKwindla 24, 2017 ngexesha 8:20 pm • impendulo
Marsha • UTshazimpuzi 8, 2017 ngexesha 4:14 pm • impendulo
Mna abangamaKristu ingqondo yam bathabatha waya ndaqalisa ukucinga ephosakeleyo uThixo apho waza wacinga ukuba uthumela ukuba yena uza yaye uza awayecinga ukuba ukuyeka ngoko ndacinga ukuba kuye ukuba abonise ndavuma ukuya khona wamsongela uThixo womonakalisa ishishini kunye nentliziyo ngoko lukhuni kuThixo nokholo lasekhohlo. Thenot uThixo kum nosapho kunye uYesu wathi thru yokuzahlula umlungiseleli evela kuThixo ngoku nangonaphakade. Ndifuna ukuzamkela umva njengoko inkosi sobomi kodwa abavumi ukuba ndibuyele. Help sicela
Rickylee • UTshazimpuzi 20, 2017 ngexesha 7:28 mna • impendulo
I uYesu Kristu; Ndingu okholwayo Bible, Ndiya kubulela Yena ukumkani wookumkani neNkosi yeenkosi!
OdioEmmanuel • UCanzibe 7, 2017 ngexesha 3:33 mna • impendulo
Ngamana igama lakhe kuzukiswa ngonaphakade
JaketaFenner • UCanzibe 13, 2017 ngexesha 10:55 mna • impendulo
ladies Hi! UYesu uyiNkosi! UYesu wajika ubomi bam, Angisafuni mna masturbater, umsiki(ukuzenzakalisa), yendele, kothiyayo, yaye zonke nyanya ngokwam. Kuthatha lukhulu ukuba abanye abantu bathi ngoko ndathi, Ngethamsanqa, ngokuba mna Asizange kuba uThixo undixolele kwezi zono kwaye andinazintloni ukuxelela nabani kuba akazange athathe nto konke konke kum, ukuba kuthi kwaye andifuni iimfihlelo bam ukuba isikhubekiso othile. Ndingathanda ukuba abantu ukuba baqhubeke eNkosini enoba kuthatha ntoni uze umcele ukuba kukuhlangule yezono nokuba uya kuba ukuthanda kweNkosi! Enkosi, UThixo ngenxa yenceba yakho nobabalo! le isihloko (3 iindlela ukuphika uThixo) kwaba luncedo kakhulu kuba kukhangela phezulu ku google kwi “I indlela kokuvuma uYesu ngakumbi” kuba ndifuna abantu bazi uYesu uyiNkosi owongamela konke, ndifuna ukukwenza ngakumbi kuba iNkosi yaye le yenye yeendlela eziphambili. Andinazintloni yeNkosi kwaye ndiya liyikhonze ezinye okanye ubomi bam de kubuyela eluthulini. Yiba imini enkulu yaye ndinethemba le post kunceda umntu ngaphandle phaya! Kukho amandla egameni likaYesu, Ndiyabulela Nkosi!
uLori • Isilimela 18, 2017 ngexesha 7:14 pm • impendulo
Njani i sixolelwe ngokumkhanyela uthixo?
gaby • EyeDwarha 11, 2017 ngexesha 7:53 pm • impendulo
NormanBerry • EyeDwarha 15, 2017 ngexesha 10:21 mna • impendulo
Ukuphendula kuYakobi. Ndifuna nje ukuba athi kwaye andinalo isibhalo esibhaliweyo ezifumanekayo ngawo lo mzuzu. Kodwa kubonakala ngathi zikrazukile phakathi uMoya oyiNgcwele kunye nezinto zeli hlabathi. Andenzi ukukha phezu kwenu oku kanye oko abantu kufayo bendalo Gods yonke amava. Kukho indlela isibhalo apho umntu abuze okokuba makenze ntoni na ukusindiswa uYesu wamxelela ukuba “kulahla wena, awuthwale umnqamlezo lwakho , andilandele.” Ubhuti, into enzima! Mna ndiyazi ethile kwincwadi kaMarko uYesu wathi “ukuba akathabathi umnqamlezo, andilandele ukuba akandifanele mna”. Ngaba Ndiva ngathi ukwenza ukuba? Ngokwesimo sam enokufa, andikwenzi. Njengokuba mna ndafunda izibhalo uze ube nomfanekiso ecacileyo malunga uthando lukaThixo kunye nedini lakhe ekudaleni thina bese uvumela sibe inkululeko yokuzikhethela sokukhetha Yena kunye nendlela yakhe okanye hayi kwaye ngoko uNyana wakhe ukuba kwakuhlala ofayo ubomi kunye nathi ukuze zihlawulele kuphela ukuba yena kukondza a fa ngenxa yezo maxesha xa musa ukulandela uThixo thina, ke mna ndiyakholwa ukuba kubanceda na kum ukuba ukulandela oko umthetho. Ekubeni ndiye umyalelo uYesu wasisebenzisa zokuphila yam yemihla ngemihla andiyi kuphinda ube lixhoba eli hlabathi nobomi. Ndzi titwa ndzi nenjongo ophilayo, nokuba mna yinxalenye ebalulekileyo yale bomi nangona kubonakale amancinci. UThixo uye wandisikelela ekufundeni kwaye ndingathanda ukuba uthi nezifundiswa ukuba inzululwazi NGABA Makazicikide uMdali waphezulu. Le uMdali ayiphelelanga ukusikelwa umda umzimba ofayo nje thina nguThixo indalo ngokwayo. Makhe sihlolisise Einstein. Okulusizi ke wayengakwazi kumitha ukuba uthixo ezinokuvula zonke ezikhona, kodwa Einsteins zaba ukuba yonke into yenziwa amandla. Amandla ayikho into kodwa ungamandla. Ngoko ke amandla ukuba ngokukodwa kuyilwa zizinto kwaye ezinye ezo izinto ibe indalo ephilayo. Kukho ubungqina bokuba kukho uThixo wendalo iphela kwaye kuphela sisele kubandezeleka aze afe nangokozuko olulambathayo. UThixo babelindele eliphezulu bethu. Le yobomi uvavanyo kwaye kufuneka uphumelele uvavanyo kunye imiyalelo usinike.
julia • EyeNkanga 1, 2017 ngexesha 1:33 pm • impendulo
wow oku intle kangaka ngokwenene ndiyathanda ukuba ndiyayithanda enkosi kakhulu ukuba eli lizwi likaThixo enkosi
oz • EyeNkanga 14, 2017 ngexesha 8:20 mna • impendulo
Enkosi nina bazalwana noodade for this post. Nanini na esitshutshisa, I / gadalala(lo waqala kwenzeka ebuntwaneni phambili) Ndaqala bamthiyileyo Igama UYESU. Ngoko nokuba kokuba azalwe ngokutsha , Mna ngokuMala mhlawumbi omnye abathathu abakhankanyiweyo kwi izithuba. Kwanasemva kokuba uvume, entliziyweni yam kukho nenzondo kubenzi Igama likaYesu nangona ndifuna ukulandela Yena nothando Yena. I am kunzima. Kungenxa yoko le nto ndiye ndaqalisa ukucinga ukuba indlela yokuvuma iGama likaYesu okanye indlela uphume ngokuMala. Ndabona le blog kwi website. Enkosi ngokwabelana. Ngaba nceda uthandazele ukuba ukubuyisela uthando lwam lokuqala kuYesu Kristu, ndahlala eluthandweni lwakhe nkqu umzimba, umoya, umphefumlo kunye neemvakalelo ukuze andiyi siyamkhanyela kude kokufa kwam okanye kwakhe kwesibili ?
Mack • EyoMdumba 3, 2018 ngexesha 8:20 pm • impendulo
Ndicinga ukuba uThixo unomdla kakhulu ngakumbi xa uthando kummelwane wethu ngaphezu nantoni speechs esizenzayo. Umfazi negalelo ukuguquka yam onothando kakhulu kwaye uya kusoloko adumisa uThixo, kodwa yena uya kusoloko kuxoxa nje njengento ukuba rhoqo asebenzisa. KODWA, lo influencer enkulu indlela uthando waba. Xa ubomi bam zangaphambili akaziwa, amagama abantu ukuba ungaphinda akukho nempembelelo kum. Kwaba izenzo zabo. Yeka uthando baba, indlela onobubele, ngayo ukwamkela. Ndinxiba i Cross kwi kwitsheyini ngokwenene elifutshane. (indaba funny. Ndathi umxokelelwane elide ngeposi ukuze Cross wam uza efihliweyo ukuze andiyi "ityala". Umnqamlezo afika ngeposi "ngempazamo" ndandimfutshane ngaphezu koko ebendinayo phambi! Uphethe umyalezo iNkosi!) Ngoko ke inganxitywa chain elifutshane BONKE uyakwazi ukubona zonke yam Cross ixesha. Kodwa ke umbuzo omkhulu ngoku, Mina onothando. Ngaba ngayo wonk 'njengomntwana abaziintanda zikaThixo? Siyamkhanyela uYesu indiva abalambileyo, umbanjwa, abangenamakhaya. UYesu wathi coca ngaphakathi wendebe abanye baya kuyinyamekela ukuba ngokwayo. Akazange Ndiyabathanda abantu ngokwenza imithandazo emide ukuze babonakale ndingcwele kunawe. Ukuba unayo uthando lukaKristu ezintliziyweni zethu kwaye enze izenzo onothando, siya bavakalisa uYesu
Mack • EyoMdumba 3, 2018 ngexesha 10:15 pm • impendulo
Ngokuphathelele Jacobs yaye thina nangoku zixolelwe? IBhayibhile izele amabali ukuxolelwa. Khangela uDavide ngubani owonileyo, owonileyo, sonile. Khangela uPetros wakhanyela uYesu 3 amaxesha laba yintloko Church. Ngoku ungumntwana kaThixo. Ngaba ngumzali olungileyo bayeke abantwana babo kuba nje wokona? Akunjalongo noko. Le umntwana wakho. Wobeka phi na yena uYihlo wethu waseZulwini. Akuzange zachaphazeleka uYesu kuchasiwe kakhulu njengoko ikratshi. Cinga umFarisi ethandaza, Nkosi ndiyabulela kuba ngokwenza mna othobekileyo ndingenjengaye nalo mbuthi werhafu yesono. Akazange usindiswe. Kodwa yena umqokeleli werhafu abathobekileyo Wayebetha isifuba, lula uYesu wabaxolela. Ngemihla yam umthandazo, Ndiye ukuba uThixo uyasithanda lilidlula. Ukuba udla ingqalelo oko sikwenzayo kulungile kunokuba engalunganga. Ukuba uthobekile kakhulu (kufuneka kube yinto. Wakhetha ukuba azalwe emkhumbini kwaye baphila ubomi yentlupheko). Kuba phantse ngathi yena nombulelo gqitha xa sikhetha ukuba sichithe ixesha kunye naye ngomthandazo kwaye andifuni kuthanda kwakhe. Yena uyazi kakuhle ukuba ukhululekile ukuba sifune kuye. Ngoko xa ngokunyanisekileyo ekufuna kuye unombulelo kwaye uyayixabisa imigudu yethu. Amaxesha amaninzi ngabo kuwangqula ngazo uThixo kude ngenxa yokuba sicinga kungekho namnye unako basithanda kakhulu. Sixolele ngolo hlobo. Kodwa akukho Tit ukuba ezinalo uThixo. Bonke abasebenzi uhlawulwa ngendlela efanayo ukuba basebenza imini yonke okanye nje kwiyure yokugqibela. Yena usoloko ekulungele Uzihluthise kuwe ngothando lwakhe, ukuba kuphela ukuba umvumele.
mynee • EyoMdumba 22, 2018 ngexesha 10:54 pm • impendulo
enkosi u ngokuba yonke into
ngomzamo Charles • EyoKwindla 6, 2018 ngexesha 2:48 pm • impendulo
Ukwazi ukuba abonile kakubi. Abapostile kusinika ithemba, ngoKristu. Bendisoloko endithandile le pecuilar.
Nixar • UCanzibe 4, 2018 ngexesha 1:09 pm • impendulo
Ndaceba ukuba ukwabelana oku zam namalungu eqela yokunqula lokuyala yokuya zethu phambi practice yethu.
Kodwa ndaziva ndinetyala ngale nto. Ndithetha kusekho into kufuneka ukuba baguquke– kwaye kukukhanyela yam PF Yena unnoticeably maxa wambi.
Bawo nceda Ndixoleleni kule yesono kundikhapha iindlela zakho zobulungisa. Amen.
Joe • UCanzibe 24, 2018 ngexesha 7:51 pm • impendulo
Oko ndisoloko ndithi xa umntu uqala eshumayela zonke amaKristu lango & ngenye imini sonke siya kuqonda ukuba nje phupha…
Kulungile ukuba ilungelo ukuze yakho ( endingayihlawuleliyo kholwa wena) AmaKristu Us abaye baphila & sasiyithanda nto sikholelwa .
Kwelinye icala ukuba oko thina maKristu sikholelwa uyinyaniso
(Yeyiphi Ndiyakholelwa ngokwenene uThixo & UNyana wakhe, uYesu wokwenene)
Sonke siya kubona xa kufika umhla. Ngaloo mini niya ukuba ukholelwe, kodwa iya kuba kakhulu emva kuwe. Ndiya kuzola Case yam.
Ngoko cinga ngayo.
Catherinemeadows • Isilimela 13, 2018 ngexesha 9:41 pm • impendulo
Ndiziva ndineentloni kangangokuba i Wakhanyela uthixo isizathu i into yokugxeka kuye moma yam ukufa im ndandineentloni ukuba bathethe nabani kunye im ziphakathi ukuba aruge nam okanye namazwi am omninzi uphume ekunene kodwa i amthande nomzalwana jesus wam chirst kunye yam uyise wasezulwini Ndiyakholwa ukuba uThixo wathuma kubo unyana wakhe wafa emnqamlezweni ngenxa yezono zethu kwaye i musani ukukholwa kuye basindiswe im kwaye i babhaptizwa kwaye i bakholelwa ilizwi lakhe, kodwa i wambeka yena kuqala i kufuneka uncedo lokufumana of scaredness yam kunye affarid kunye neentloni nga yall ndinceda kwaye ndiyabulela kakhulu ngenxa yokuba i kufuneka ukuba uyise ukuba ndakhe wokhanyelwa emehlweni ngenxa yezenzo zam Efrayimi uyise uxolo pls ndixolele kundithanda wena kunye negama jesus amen
Robert • EyeNkanga 17, 2018 ngexesha 6:25 pm • impendulo
Themba oku kuyanceda Catherinemeadows
Aniwiselwe ndim na umthetho? Yomelela, ukhaliphe; Sukoyika, musani ukuqhiphuka umbilini, ngokuba uYehova uThixo wakho unawe naphi na apho uya khona. " (ukubona Bible, Joshua 1:9)
namhlanje, Uthi kuwe iNkosi, "Sibe nesibindi!"
"Wathi ke yena, "O ndoda inqwenelekayo, ukoyika! Uxolo malube kuwe; Yomelela, ewe, Yomelela!"Ngoko, xa abethetha nam ndomelezeka, wathi, "Makhe Nkosi yam ithethe, kuba undomelezile. "" (ukubona Bible, daniel 10:19)
Ukuba ibe mbi intliziyo yakho mayingakhathazeki? Yiba nesibindi…nguThixo wenu apha!
Lowo onika uxolo ebunika kuthi ngokupheleleyo.
Abo ugcine amehlo abo nijonge kuThixo uhambe ngayo ishishini lakhe sinokuqiniseka ukuba uya kubanyamekela yabo.
NguYe okufaneleyo abo Ubiza.
NguYe ezinikezela ubulungisa.
NguYe lowo ubonelela.
Lowo oxelela ukuba nibe nomxhelo owonwabileyo yomelele nto bekugculela.
IBhayibhile ithi kwakhona, "Kodwa ngoku, itsho iNkosi , qamba you, A Jacob, Kwaye Yena uMbumbi wakho, O Israel: "Ukoyika, ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela; Ndikubizile ngegama lakho; Ungowam. Xa uthi uwele emanzini, Ndiya kuba nawe; Kwaye imilambo, ukuba ayisayi kukuntywilisela. Xa uthi uhambe emlilweni, akuyi kurhawuka, Okanye baya nelangatye lingakutshisi. "" (Isaya 43:1-2)
Yiba nesibindi, Catherine. Abo engqongileyo ukuze awazi ukuba, kodwa uThixo uyakubiza ngegama lakho ...! You are Akhe. He is nawe, nkqu emlilweni kwetyala. Naye ngecala lakho, awusoze ube wedwa. Yiba nesibindi!
Le site kundinceda A mmangaliso yonke imihla Jesus.net
Tina Olafusi • EtiMnga 5, 2018 ngexesha 11:43 pm • impendulo
Siyabonga Nkosi iqashiso, ngokwenene yenza ukuba ukwazi apho ndikhoyo mna eNkosini apho i kufuneka siqhubeke ukusebenza usindiso lwam.
UCanzibe • EyoMqungu 26, 2019 ngexesha 5:04 pm • impendulo
Ndincede nceda, phika uYesu, UThixo wamphilisa me xa ndandineminyaka 10 iminyaka, Wathabatha me abavela ubufebe, Wathabatha yandihlutha emhadini izihlandlo eziliqela, It has isithembiso enkulu ebomini bam ndize nje yikhanyele, omnye umlingane wam wabuza ukuba kwaba ne lokwenyaniso ZIZIPHI ibiphawula, Ngase yabavangeli, Ndandineentloni ukuba idlale ngami ngenxa elidluleyo yam wakhanyela uYesu, ngoku uziva kakubi. :(
Ronald • UCanzibe 3, 2019 ngexesha 10:46 mna • impendulo
Ndiyazi ukuba ndiya kumkhanyela uThixo ngeendlela ezininzi,ekubeni ukufunda eli nqaku kufuneka,ilungelo into
Joseph Sabiiti • Isilimela 17, 2019 ngexesha 9:25 mna • impendulo
bakhuthazwa kakhulu. Ndiza kulungiselela umyalezo malunga 3 iindlela landula uThixo ndafumanisa luncedo gqitha iwebhusayithi yakho wasisebenzisa.
Tracy • Isilimela 23, 2019 ngexesha 11:58 mna • impendulo
Ngamanye amaxesha ndicinga ukuba uThixo into yonke nje indlela ukusenza uzive ngcono ngokuba nzulu ezantsi siyazi sife kwaye kwemkiwa ngonaphakade. Loo nto yenza me ndidandathekile buhlungu. Kodwa abantu abaye bafa libonakale khona ngonaphakade yaye kubonakala ngathi umnqweno inzaliseko ukuba ufuna kuphinda niwabone. Ubomi kubonakala lutho yaye abaninzi bakholelwa kule. iintsuku ezithile Ndiyakholwa, abanye ithemba. I ukufunda amaqashiso isifundo. Am I ezimiselwe esihogweni okanye yintoni na eyenzekayo?